एसपी पन्तको वरिपरि बदनामहरुको घेराबन्दी ! - नेपालबहस
एसपी पन्तको वरिपरि बदनामहरुको घेराबन्दी !
| १३:४४:३० मा प्रकाशित
२४ बैशाख, बीरगंज । प्रहरी संगठनमा ज्यादै बदनामी कमाएका विवादित सई वैद्यनाथ दासलाई पर्साको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जिम्मेवार ठाउँका रूपमा रहेको इनर्वा भन्सारस्थित चौकीको इन्चार्जमा खटाइएको छ ।
चितवनमा कार्यरत रहँदादेखि नै ज्यादै बदनाम भएका सई दासलाई वीरगञ्ज हाजिर हुनेबित्तिकै इनर्वा नाका पठाउन लागिएको थियो । तत्कालीन एसपी रेवती ढकालले उनको बदनामी थाहा पाएपछि माथिको दवाव झेल्दै उनलाई इनर्वा नपठाई बसपार्क पठाए ।
बसपार्कमा पनि त्यसरी नै बदनाम भएका असुलीधन्दाबाहेक अरू नगर्ने सई दास त्यसपछि परवानीपुरस्थित चौकीमा आएका थिए । त्यहाँ पनि ज्यादै बदनाम भएका उनी जिल्लामा तानिएका हुन् । अहिले यिनै विवादित र बदनाम भ्रष्ट भनेर चिनिने वैद्यनाथ दासलाई इनर्वा चौकीको इन्चार्जमा पठाइएको छ ।
दासले आफैंले आफुलाई स्वघोषित सिंघमको रुपमा चिनाउने गर्दछन् । तर हिन्दी फिल्मको पात्र सिंघम गुण्डा र तस्करी हटाउने प्रतीकका रुपमा चिनिन्छ भने तर सई दास भने तस्कर र अपराधीलाई लाइन चलाउन दिएर लाभ लिनेमा पर्दछन् । उनले केही दिनअघि केही बोरा छोकडा समातेर आफूलाई सिंघमको रुपमा प्रचार समेत गराएका थिए । पर्साका एसपी गंगा पन्तले क्राइम ब्रान्चको इन्चार्ज बनाएका इन्स्पेक्टर रविभूषण यादवले नै सेटिङ गरी दासलाई इनर्वा नाकाको इन्चार्जमा पठाएका हुन् । मासिक निश्चित दस्तुरी बुझाउने गरी उनलाई पठाइएको बताइन्छ ।
यतिबेला इन्सपेक्टर यादव एसपी पन्तका विश्वासपात्र बनेका छन् । डीएसपीलाई पनि माइनस गरी सबै काम पन्तले तिनै इन्स्पेक्टर मार्फत् गराउँदै आएको पर्सा प्रहरी स्रोतको भनाई छ । पर्साकी एसपी पन्त आफु इमान्दार भएपनि उनका वरिपरि किन बदनाम पात्रहरु मात्र हुने गर्छन् भन्नेमा जानकारहरु हैरान भएका छन् ।
विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० लाख नाघ्यो ४ मिनेट पहिले
जापानद्वारा फाइजरलाई थप खोप आपूर्तिको लागि आग्रह ६ मिनेट पहिले
दिनदिनै महामारी फैलिदैछ तर सावधानी छैन, जोखिम उच्च ! ३० मिनेट पहिले
संक्रमण बढेसँगै यतीकाे स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई ४३ मिनेट पहिले
नेप्से आज दोहोरो अङ्कले ओरालो ४८ मिनेट पहिले
खोजिदै ‘स्टार अफ द मिलिनियम २०२१’ ३ दिन पहिले
बाख्राफार्ममा आगलागी हुँदा ६० लाखको क्षति ९ घण्टा पहिले
माओवादी केन्द्र प्रदेश २ को संसदीय दलको नेतामा साह ७ दिन पहिले
हत्या र लुटपाटमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउछौ : कानूनमन्त्री यादव ३ दिन पहिले
फलेवासको केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय रोक्का सर्वोच्चको आदेश १ हप्ता पहिले
जुम्लाको सिञ्जा सभ्यता पर्यटनको रोजाइमा ३ हप्ता पहिले
संसदीय प्रणाली जोगाउने कांग्रेसको दायित्व : नेता पौडेल ७ दिन पहिले
बिस्केट जात्रा : स्थानीयबासी खुसी, कोरोनाको त्रास उच्च १ हप्ता पहिले
वडाध्यक्षको भत्ता निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षिकालाई तलब ९ महिना पहिले
कर्णालीमा दुई हजार ७५५ जनाको स्वाब रिपोर्ट नेगेटिभ ११ महिना पहिले
असार १५ गते साढे पाँच करोडको दही बिक्री १० महिना पहिले
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको शेयर नेप्सेमा सुचीकृत, भोलिबाट कारोबार खुल्ने ८ महिना पहिले